Fitantanan-draharaham-panjakana : nofoanana noho ny fandevenana ny filankevitry ny minisitra (NewsMada) | AEMW
Fitantanan-draharaham-panjakana : nofoanana noho ny fandevenana ny filankevitry ny minisitra (NewsMada)
Samy tsy nisy avokoa ny filankevitry ny governemanta, ny talata teo, sy ny filankevitry ny minisitra, tokony ho natao, omaly. Anisan’ny anton’izany ny fandevenana ny minisitry ny Angovo, Ramanantsoa Rodolphe.
Notanterahina tany Ambalavao, omaly ny fandevenana ity minisitra, nodimandry tampoka ny faran’ny herinandro teo ity tany Mahajanga. Anisan’ny niatrika izany tonga tany an-toerana ireo lehiben’ny andrimpanjakana rehetra, notarihin’ny filoha Rajaonarimampianina sy ireo minisitra maromaromaro eo anivon’ny governemanta. Nitarika izany ireo minisitra zanaky ny faritanin’i Fianarantsoa, Andriamosarisoa Jean Anicet sy Rasoazananera Marie Monique. Minisitra efatra sisa kosa, tarihin’ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Atallah Béatrice no miandry raharaha aty Antananarivo amin’izao tsy maha eto an-dRenivohitra ireo mpitondra ireo izao.
Miandry ny fanendrena minisitra vaovao
Manoloana izany, banga aloha izany ny toerana eo anivon’ny minisiteran’ny Angovo. Tombanana fa hisahana izany vonjimaika ny sekretera jeneralin’ity minisitera iray ity, mandra-pisian’ny fanendrena vaovao. Tsy mbola fantatra na haharitra ny fitantanana vonjimaika na hiroso amin’ny fanendrena avy hatrany ny filankevitry ny minisitra amin’ny herinandro. Anisan’ny departemanta miantoka ny fiainam-bahoaka sy ny toekarena nefa mampitaraina ny maro amin’ny ankapobeny rahateo ity resaka angovo ity. Efa teo am-pamolavolana paikady vaovao ny minisitra teo aloha izao nodimandry izao.
Andrasana ny fanovana na fanatsarana hoentin’ny mpitantana vaovao eo.
@dmin August 25, 2016 NewsMada No Comments
← Mpanao gazety – Fampananan-kery ny lalàn’ny serasera : « Ho tompon’andraikitra eo amin’ny tantara ny fitondrana…» (NewsMada)
Lalàn’ny fifandraisana sy ny serasera – Hoy ireo mpanao gazety sasany : (NewsMada) →